GHRE ပညာရေးဌာန ပညာရေးလမ်းညွှန် အလုပ်ရုံ ညှိနှိုင်းဆွေးနွေးပွဲကျင်းပ | B.M.T.A Burmese Migrant Teachers' Association
← Report about the Socialstudy workshop may3to7,2010
Wisdom Journal Volume 1 NO2publiched by BMTA co-operate with Thinking class room foundation →
GHRE ပညာရေးဌာန ပညာရေးလမ်းညွှန် အလုပ်ရုံ ညှိနှိုင်းဆွေးနွေးပွဲကျင်းပ	Posted on May 28, 2010	by bmta05 မေလ ၂၈
ထိုင်းနိုင်ငံတောင်ပိုင်း ဖန်ငအခြေစိုက် အခြေခံ လူထုအခြေပြု လူ့အခွင့်အရေး ပညာပေးဌာန အတွင်း ပညာရေး ဆရာ/မတို့အား ၂၀၁၀ ပညာသင်နှစ်အတွက် လိုအပ်သည့် လမ်းညွှန်သင်ရိုးများ နှီးနှောဖလှယ်ပွဲကို ယနေ့ တွင် စတင်ကျင်းပကြသည်။
အဆိုပါအဖွဲ့ ၏ ပညာရေးဆိုင်ရာ အတိုင်အပင်ခံ ပညာရေးအကြံပေးပုဂ္ဂိုလ် ဆရာ ဦးသိန်းနိုင်က“GHRE အဖွဲ့ပညာရေးဌာနက ပညာရေးဝန်ထမ်းတွေနဲ့ ပြီးခဲ့တဲ ၂၀၀၉ ပညာသင်က ကြုံခဲ့ရတဲ့ အခက်အခဲတွေ၊ လိုအပ်ချက်တွေကို ခေါင်းစဉ် ၁၂ ခုခွဲပြီးတော့ ၃ ရက်တိုင်တိုင် အပြန်အလှန် ဆွေးနွေးကြမှာဖြစ်ပါတယ်။ အလုပ်ရုံ ဆွေးနွေးချက်တွေအရ နောက်ဆုံးနေ့မှာတော့ လူငယ်သိပ္ပံ သင်ရိုးညွှန်းတမ်းနဲ့အနာဂတ် ရည်မှန်းချက် ဆိုတာတွေကို ချမှတ်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်” ဟု ပြောသည်။
ထိုင်းနိုင်ငံတောင်ပိုင်းတွင် ပြည်တွင်းမှာရောက်ရှိနေကြသည့် မြန်မာအလုပ်သမားများ၏ ကလေးငယ်များအား သင်ကြားရန် ဖွင့်လှစ်ထားသည့် GHRE ပညာရေးကျောင်းတွင် အခြေအနေအရ မြန်မာနိုင်ငံ သင်ရိုးညွှန်းတမ်း၊ ထိုင်းသင်ရိုးညွှန်းတမ်းတို့ အား လက်တွေ့ သင်ကြားနေသည့် ဆရာ/မ တို့ က တက်ရောက်သင်ကြားနေသည့် မြန်မာအလုပ်သမားကလေးငယ်များ၏ အနေအထားအပေါ် မူတည်၍ လက်တွေ့ အကျဆုံး အဆင်အပြေနိုင်ဆုံး သင်၇ိုးညွှန်းတမ်းကို အတည်ပြု သတ်မှတ်ကြမည်ဖြစ်ကြောင်း၊ ဆရာဦးသိန်းနိုင်က ပြောသည်။
“လူတိုင်း ဘွဲ့ရ ပညာတတ်ဖြစ်မှာ မဟုတ်ပါဘူး၊ ယှဉ်ပြိုင်မှုနဲ့ ရွေးချယ်မှုအရေးကြီးပါတယ်။ ဒါပေမယ့် ကျနော်တို့ ဆီမှာ စာသင်ခွင့်၇ရှိတဲ့ ကလေးငယ်တစ်ယောက်ဟာ ဝေဖန်ပိုင်းခြားနိုင်တဲ့ အဆင့်၊ ဆုံးဖြတ်ချက်ချနိုင်တဲ့ အဆင့်။ အမှားအမှန် ခွဲခြားနိုင်တဲ့အဆင့် စသဖြင့်ပေါ့လေ။ ကျနော်တို့ ကျောင်းပညာရေးက တစ်စုံတစ်ရာ အဆင့်အတန်းတော့မှီပါတယ်။ ပညာရေးစနစ်ကို ကျနော်တို့ တိုင်းတာတဲ့အခါ ဘွဲ့ ရမှမဟုတ်ပါဘူး” ဟု ဆက်လက် ရှင်းပြသည်။
ဒေသတွင်း မြန်မာအလုပ်သမား အတော်များများတို့မှာ ပင်လယ်ငါးဖမ်းလုပ်ငန်း၊ ရာဘာခြံလုပ်ငန်း၊ ပန်းရံလုပ်ငန်းနှင့် အခြားအိမ်အလုပ်များတွင် လုပ်ကိုင်လေ့ရှိကြသည်။ မိမိ၏ သားသမီးများအတွက် ပညာရေးကို ဂရုစိုက်တိုက်တွန်းမှု အထူးနည်းပါးကြသည်။ GHRE တွင်ပညာသင်ရင်း အင်္ဂလိပ်စကားနှင့် ထိုင်းဘာသာစကား အသင့်အတင့် ကျွမ်းကျင်တတ်မြောက်သွားသည့် မိမိတို့၏ သားသမီးများကို အဆင့်မြင့်ပညာကို ဆက်လက်သင်ကြားနိုင်ရန် ရည်ရွယ်ချက်မရှိတော့ကြပေ။
ထိုင်းတောင်ပိုင်း ခရီးသွားလုပ်ငန်းများတွင် ဘာသာပြန်နှင့် ၀င်ငွေကောင်းသည့် အလုပ်နေရာများတွင် အလုပ်အကိုင် လုပ်ကိုင်နိုင်ရေးတို့ကိုသာ အထူးအာရုံပြုကြတော့သည်။ အရည်အချင်းရှိပြီး ပညာသင်ကြားလို သေးသည့် ကလေးများရှိကြသော်လည်း နေထိုင်ရပ်တည်ရေးအတွက် ရုန်းကန်လှုပ်ရှားနေသည့် မိဘများကို ကူညီရင်းဖြင့် အလုပ်သမားဘ၀တွင် ကျင်လည်နေသည်က များကြကြောင်း GHREတွင် ပညာသင်ကြားနေသည့် ကျောင်းသားမိဘတစ်ဦးက ပြောပြသည်။ GHREတွင် ယခုပညာသင်နှစ်အတွက် ကျောင်းသား ခြောက်ရာကျော် စာရင်းပေးသွင်းထားပြီး ဆရာ/မ ၄၀ နီးပါး ရှိကြောင်းသိရှိရသည်။
This entry was posted in သတင်း. Bookmark the permalink.	← Report about the Socialstudy workshop may3to7,2010